I-china abakhiqizi be-epoxy fiberglass Sup nabaphakeli | IPanda
Umbala onsomi, umbala opholile ongawuhambisa, kodwa ungowombala omuhle.
Okuluhlaza okukhanyayo kufanekisela ithemba, ukuthula, impilo, imibala emibili epholile yokwenza ndawonye, ​​futhi kungaklama ibhodi yokudweba enhle, ene-bungee emhlophe nakanjani izothola iqembu likadadewethu othandekayo.
Vikela igama: I-Epoxy fiberglass SUP
Izinto: I-EPS foam core (26KG / CBM) + umucu wokhuni + 3 ungqimba we-Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth phezulu + 2 ungqimba we-Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth on bottom + high gloss epoxy finish.
Usayizi: ngezifiso sukuma gwedla ibhodi, imvamisa kusuka ku-9'6 kuye ku-14'0.
Idizayini: ngokwezifiso ubuso obubili be-epoxy fiberglass ngaphezulu nangaphansi.
Ilogo: ngezifiso usilika screen LOGO.
Isesekeli sokukhokhwa kwamahhala: 9ft plastic single middle fin + 2 fins side side fins on future / 9ft plastic single middle fin + 2 small plastic fins on FCS
Idizayini yamahhala: sinomklami ophezulu eChina futhi singanikeza ukwakhiwa kwamahhala, noma ungasithumela ukuklanywa kwefayela le-AI / ifayela le-PDF ukukhiqiza.
I-Pad: eyenziwe ngezifiso izinhlobo eziningi ezahlukahlukene, inedayimane pad, i-yoga pad ethambile, iphedi yephethini ne-Stripe pad. Ukuze sigwedle ibhodi, sizosebenzisa idayimane pad ukukhiqiza, ngoba idayimane linezinhlayiya ngaphezulu, abantu abaphethe amandla bayoba ngcono lapho bemi.
Imininingwane yokupakisha: i-bubble warp + amakhadibhodi (Impumulo, Umsila nokuqiniswa kwesitimela) + ibhokisi lebhokisi
Ibhokisi: 1 ucezu angabeka 1 ibhokisi ibhokisi.
MOQ: ama-30 ama-PC
Isikhathi sokuhola: ngesampula cishe izinsuku eziyi-15, okunye kuya ngobungako.
Indlela yokuthumela: Ulwandle noma umoya
Isitsha se-20 ft GP: izingcezu ezingama-50.
Isitsha se-40ft HQ: izingcezu eziyi-120.
Izinzuzo eziyinhloko zokuncintisana:
ama-oda amancane amukelwe, Ikhwalithi yobungcweti eqinile yemikhiqizo, izinsizakalo ezifika ngesikhathi neziphumelelayo.
Langaphambilini ICarbon Fibre Sup
Olandelayo: indwangu yokuphrinta uphaphe lwe-SUP